Maxaa kala qabsaday General Ugaandhees ah iyo Saraakiil Mareykan ah markii ay qorsheysteen qabsashada Bariire? [Warbixin Xasaasi Ah].
Wednesday November 01, 2017 - 18:41:44 in Wararka by Super Admin
Xilli si weyn ay u muuqato is-bar bar yaaca iyo kala socodka Taliska Ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya iyo Taliska Ciidanka Mareykanka ee dagaalka toos ugusoo biiray ayaa warbixin cusub waxey daaha ka qaadday kala aragti duwanaanta ka dhexeysa labad
Xilli si weyn ay u muuqato is-bar bar yaaca iyo kala socodka Taliska Ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya iyo Taliska Ciidanka Mareykanka ee dagaalka toos ugusoo biiray ayaa warbixin cusub waxey daaha ka qaadday kala aragti duwanaanta ka dhexeysa labada talis marka ay timaado la macaamilka xaaladaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ciidamada AMISOM oo ay muuqato in duruus ay ka qaateen weeraradii cuslaa ee ay wajaheen sanadihii u danbeeyay ayaa isku dayay iney la taliyaan saraakiil Mareykan ah oo cududoodda ay tustay in wax waliba sida ay doonaan ay ka sameyn karaan balse fashil uu qabsaday.
Warbixin lagusoo daabacay warbaahinta Daily Beast, ee Mareykanka laga leeyahay, ayaa General Kayanga Muhanga oo ka mid ah hoggaanka Ciidamada Uganda ee gobolka Sh/Hoose wuxuu kashifay kulamo uu la yeeshay saraakiisha Mareykanka intii lagu guda jiray qorsheynta qabsashada deegaanka Bariire, oo markii hore Jananku rajo wanaagsan uu ka qabay balse su’aalo badan ka dib uu quus gaaray.
Ameerikaanka ayaa markii hore doonayay in Bariire ay ku qabsadaan Ciidamada Uganda, balse Generaallada ciidankaas ayaa muujiyay in si weyn aaney diyaar u aheyn oo qorshaha arrinkaas u baahan yahay ka fiirsasho dheer.
Su’aalaha uu General Muhanga weydiiyay Saraakiisha Mareykanka waxaa ka mid ahaa haddii Bariire loo haayo ciidamo dheeraad ah sababtoo ah wuxuu ogaa in Ciidamada Soomaalida ee tiradoodu yar tahay tababartooduna ay hooseyo aaney kaligood awoodi Karin iney joogaan meel difaac hore ah sida Bariire, balse waxaa la yaab ku noqotay in Ameerikaanku qudhoodu aaney waxba kala soconba xaaladda gobolka.
Sida warbixintu sheegtay, saraakiisha UPDF-ta Uganda ayaa qaadacay qorshaha dagaalka Bariire markii ay arrimo badan is tusiyeen, waxeyna muujiyeen cago jiid, taas oo keentay in si kadis ah Mareykanku ugu weecday Ciidamada Soomaalida, wuxuuna doortay guutada 20aad oo aheyd mid liidata.
"Waxaan u sheegay Raggii Mareykanka ahaa in Ciidanka Soomaalidu aysan qabsan Karin goob, ayna sii heysan Karin, sababtoo ah maba heystaan hub ku filan” ayuu yiri General Muhinga, isagoo kusii daray in Mareykanku uusan aqoon u laheyn gobolka Sh/Hoose oo ah gobol weyn, isla markaana leh keymo badan.
Saraakiisha Mareykanka oo ay muuqatay in ay iska indhatireen digniinadii ay baxsheen saraakiisha Uganda ee iyagu aadka faraha uga gubtay dagaallada Xarakada Al-Shabaab, ayaa waxey weerar kusoo qaadeen Bariire bishii August, waxana ugu danbeyn u suuragashay iney magaalada qabsadaan, laakin walwalku wuxuu ka taagna sida lagu sii joogi doono.
Warbixinta oo soo xiganeysa saraakiil ciidan, ayaa sheegaty in Mareykanku uu ka sameeyay Bariire ilaa 3 difaac oo la kala dajiyay Ciidamada Soomaalida oo isugu jiray kuwa Mareykanku watay iyo kuwa kale ee Guutada 20aad.
Laakin qorshahaas wuxuu u muuqday mid qar iska xoor ah marka loo eego halista ay wajahayeen ciidamadaas, sida uu qabo General Muhanga, Ciidamada Soomaalida ee la dajiyay Bariire waqtigaas waxey ahaayeen kuwo geeri sugayay.
"Ina aad heysato hub casri ah kaliya kuguma filna” ayuu u sheegay Saraakiisha Mareykanka, wuxuuna ku sii daray " waa in dhulka aad u taqaan”, isagoo ka digay in mar uun xarumahaas cagta ay marin doonaan Al-Shabaab oo askartaasna la leyn doono, dabcan sidii ayayna wax u dhaceen.
29-kii September, oo aheyd bil kadib qabsashadii Bariire, subax waa hore ah ayay magaaladu la kulantay duullaan dhan waliba ah oo ay soo qaadeen Al-Shabaab, waxeyna cagta mariyeen xeryihii Ciidamada, waxeyna laayeen askar aad u fara badan.
Arrinta in la xuso mudan ayaa ah in maalin ka hor duulaanka Al-Shabaab, ay saraakiisha Mareykanku kormeereen difaacyada magaalada ayna niyad dhis u sameeyeen askarta Soomaalida, balse awood uma helin iney joojiyaan halaaggii soo socday.
Hadda deegaanka Bariire waxaa si buuxda gacanta ugu haya Xarakada Al-Shabaab, waxaana taasi ay calamaad u noqotay fashilka qorshihii Mareykanka ee ahaa in ay dhul ka qabsadaan Al-Shabaab.
Haddii xittaa Bariire ay sii joogi lahaayeen waxey noqon laheyd deegaan kasta iyo dhul kasta oo ay heystaan Al-Shabaab in loo baahdo Ciidamo Mareykan ah oo qabsada, soona hoggaamiya ciidamo kale, markaas imisa Ciidamo Mareykan ah ayaa loo baahnaan lahaa marka looga eego baaxadda deegaanada iyo dhulalka ay joogaan Al-Shabaab? Balse hadda oo xittaa qorshihi Mareykanku fashilmay, kuwii Afrikaantuna ay ka sii horeeyeen, yaa buuxin kara booskaas oo Soomaaliya jooga?.
Iska Warka: Dailybeast
Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Qarax Muqdisho Lagula Beegsaday Saraakiil Katirsan Midowga Yurub.